Miseensa Poolisii Oromyaa: 'Shanee waliin hariiroo qabda jechuun hojiirraa na hari'an' - BBC News Afaan Oromoo
Miseensa Poolisii Oromyaa: 'Shanee waliin hariiroo qabda jechuun hojiirraa na hari'an'
Image copyright FB Saajin I/A Gammachuu Girmaa
Saajin I/A Gammachuu Girmaa jedhama; Komishinii Poolisii Oromiyaatti miseensa Cibiraa Eegumsa VIP ta'ee hojjetaa ture. Miseensa poolisii Oromiyaa kun tibba kana namoonni waan lamaaf miidiyaalee hawaasummaarratti maqaa isaa kaasanii bal'inaan haasa'aa jiru.
Tokkoffaan, Saajin I/A Gammachuu miseensa poolisii ta'ee osoo jiruu kitaaba barreessee maxxansiifachuu danda'uu isaatiif dinqisiifatu. Sababiin isaas kun mana poolisii keessatti kan hedduu baratame miti.
Tajaajila poolisummaa isaa ba'achaa osooma jiruu kennaafi dandeettii isaan ammoo kitaaba barreessuun miseensa poolisii kanaa waan fakkeenya gaarii ta'eefi jajjabeeffamuu qaba jedhu.
Poolisoonni biroonis fakkeenya gaarii kana hordofanii hojii artiifi hog-barruu keessatti hirmaachuun lammii isaanii ni tajaajilu jechuun kan yaada kennan hedduudha.
Haata'u malee, Saajin I/A Gammachuu kitaba isaa 'Loltuu Haqaa' jedhu kuusaa walaloo 62 of keessaa qabu akkuma maxxansiisee eebbisiiseen guyyoota muraasaan booda hojii poolisummaa isaarraa ar'iamuun dubbii ijoo miidiyaa hawaasummaa biroo ta'eera.
'Qabsoo dhiigni Qeerroo itti dhangala'e duubatti dhiifamuu hin qabu'
Waan Saajin I/A Gammachuu mudate maal ture?
BBC Afaan Oromoo Saajin I/A Gammachuu dubbii isarratti odeeffamaa jiru kana qulqulleeffachuu itti bilbiluun turtii waliin taasiseera.
Kitaaba barreessee maxxansiifachuufi sababa amansiisaafi qabatamaa hin taaneen hojii poolisummaa jaallaturraallee ar'amuun isaa sirrii akka ta'e ibsuun, dhugaa waa'ee isaa jiru hima Saajin I/A Gammachuu.
Hojii poolisii kan eegale waggoota ja'aa ol akka ta'e kan dubbatu Saajin I/A Gammachuun, turtii isaa keessattis haarsaa ogummaafi naamuusni hojichaa isa gaafatu guutuun amanamummaadhaan hojjechaa turuu kaasa.
"Waggoottan hamma kana keessatti, qorra, aduu, rooba utuu hin jedhiin dirqama narraa barbaachisuun uummatakoo tajaajilaa akkan ture ofittan amana."
Hojii polisummaa kana fedhii isaatiin waan itti seeneef hanga gaafa xalayyaan ittiin hojiirraa dhorkame isa qaqqabutti hojii isaa poolisummaa kana itti gammadee hojjachaa turuu dubbata.
Fedhiifi kennaa hojii hog-barruufi aartii
Saajin I/A Gammachuu poolisummaan dirqama hojii itti kenname bahachuu bira darbee kennaa aartiifi ogummaa barreessuu keessasaa akka jiru yeroo mana barumsaa ture of keessatti hubate callisee dhiisee hin teenye.
Dubbisuu, barreessuufi aadaa ofii guddisuuf hojiin poolisii akka nama hin daangessinettin amana jedha Saajin I/A Gammachuun.
Image copyright Fuula FB Saajin I/A Gammachuu
"Hawwiin keessakoo ture, poolisiin keenya hundumtuu akka baratu, akka dubbisu, akkasumas barreessuu akka danda'u agarsiisuuf, isa aartii ummatasaa guddisuuf kitaaba barreessu, isa fiilmii hojjetu ari'ee doorsisuun hafee; ofuma isaatiiyyuu aartii uumataa baasee mullisuu, akkasumammoo gama ogummaa isaatin eeguufi kunuunsuu akka danda'u agarsiisuuf hawwiifi kaka'umsa guddaan qaba ture."
Saajin I/A Gammachuun poolisiin kan namni yeroo argu gammaduufi nagummaan itti dhaga'amu ta'uu malee kan namni sodatu ta'uu hin qabu jedha.
Poolisiin gaachana ummataadha kan jedhu hojii qabatamaan agarsiisuuf hanga giidoo isaatti kan hojjechaa jiru Saajin I/A Gammachuun, "Poolisii nama rukutu, nama ajjeesuu, akkasumas poolisiin nama dararuun hafee, poolisii jaalala hawwaasaa qabu, akka uumamu nan barbaadan ture," jechuun fuula Feesbuukii isaarratti barreesseera.
Miseensi poolisii tokko kana raawwachuudhaaf ammoo yeroo yerootti gahumsaafi naamuusa guddifachuudhaaf dubbisuufi barreessuun barbaachisaa akka ta'etti akka amanu ibsa.
Hawwiifi fedhiin isaa kana ta'ullee Saajin I/A Gammachuu hojiirraa ar'amuun fedhiin isaa kun akka gufatu ta'eera.
Sababii 'dhugaarraa fagaateen' hojii isaarraa akka dhorkame kan dubbatu Saajin I/A Gammachuu, dhugaa qaba jedhullee qaamni irraa fuudhu akka dhibeefi akeekkachiisa seeraan jiru osoo hin hordofiin hojiirra dhorkamuu dubbata.
Yakkan raawwatteetta jedhamerratti ragaa qabatamaan kan dhiyeesse hin jiru kan jedhu miseensi poolisii kun, koree naamusaan ilaalameera jedhamuun bulchiinsi humna namaa Komishinii Poolisii Oromiyaa xalayaa akka hojiirraa dhorkame isaaf kennuu hima.
'Shanee waliin hariiroo qabda...'
Dhimma isaan akka yakkaatti irratti kaasan waa sadii ibsa Saajin I/A Gammachuun.
Tokkoffaan, 'Shanee' waliin hariiroo qabda naan jedhan jedha.
Inni garuu akka seeraafi danbii poolisiin ajajauutti miseensa paartii kamiiyyu akka hin taane dubbata.
Sababii biroon hojiiraa dhorkamuuf irratti dhiyaate ammoo alaabaa ABO qabattee suura waan kaateefi ati ABOdha kan jedhudha.
Kana irratti Saajin I/A Gammachuun ani ABO ta'ee osoo hin taane namni alaabaa ABO qabate yoo akka carraa, beekees ta'e osoo hin beekiin suura na waliin ka'e gaafatamuu akka hin qabne dubbata.
Kitaaba barreessuun sababa hojiirraa dhorkamuu ta'aa?
Hojiirraa hari'amuu koof sababi kan biraan kitaaba barreessuu kooti jedha Saajiin I/A Gammachuu Girmaa.
Kitaaba barreessee maxxansiise akka Komishiniin Poolisiin gulaalamu taasisuu isaa kan ibsu Saajin I/A Gammachuu, walaloo kitaaba koo keessaa tokko tokko keessaa baaste malee jechuun qeequmsa naaf dhiyeessaa turan jedha.
Kitabni kuusaa walaloo inni barreesse dhimma aadaa, hawaasummaafi jiruufi jireenyaa kan ibsudha. Siyaasa irraa bilisa ta'ee osoo jiruu akka garii keessaa hambisuuf gulaaluun isaanillee sirrii akka hin turre dubbata.
Kanarraa ka'uun jedha misieensi poolisii kun, "kitaaba barreessite Shaneef barreessite naan jechuun A L I 24/11/2011 irraa eegalee mooraa keessaa alatti ana ari'uun Finfinnee keessatti bakkan buluufi waanin nyaadhu dhabee hamma agabuun na ajjeesuu gahutti rakkadheera.
Booda A L I 04/05/2012 ammoo hojiirraa akka ana gaggeessan natti himan," jedha.
Xalayaan akka Saajin I/A Gammachuun hojirraa dhorkamuuf ka'umsa ta'e Komishinii Poolisii Oromiyaarraa barreeffame, Komishinichatti Cibiraan Eegumsa VIP inni keessa hojjetu akka tarkaanfii mataa isaanii irratti fudhatan kan gaafatudha.
Xalayaan Komishiniin Poolisii barreesse kun akkas jedha:
"Miseensi poolisii Saajin I/A Gammachuu jedhamu kanaan dura rakkoo ilaalcha adda addaatiin walitti makamee deemaa waan jiruuf kunis, (FB irrattis Shanee wajjin jirra) jedhee barreessee kan argame yoo ta'u gama keenyaan miseensi kun Cibiraa keenya keessatti rakkoo ilaalchaa akkanaa qabaatee nu wajjin deemuu waan hin dandeenyeef gaafa guyyaa 24/11/2011 irraa eegalee qabeenyaa mootummaa harkaa fuunee hojii idilee isaa irraa akka dhaabbatu waan murteessineef Eegumsa VIPtiif murtee mataa isaa akka fudhatu beeksifnee turre," jedha.
Bu'uuruma kanaan ammoo Cibiraan Eegumsa VIP kunis tarkaanfii Saajin I/A Gammachuu irratti fudhate xalayaan deebiseeraaf.
Dhugaan jiru hoo maali?
Akka Saajin I/A Gammachuun jedhutti garuu dhugaan jiru kan hojii isaarraa dhorkamuuf sababa ta'e miti.
"Ani poolisiidha, miseensa dhaaba kamiiyyuu miti. Isa afaaniin dubbatamu caalaan beeka. Eenyuuf akkan dhaabadhees haleelladheetan beeka. Dhaabolee Ykn paartii Oromooyyuu mitii lammii kamiifuu akka ta'utti qaama nageenya qofa eegsisuuf dhaabate akkan ta'e sirriittan of beeka," jedha.
Waa'ee kitaaba 'Loltuu Haqaa'
Hojiin isaa idilee poolisii ta'ullee kitaabni Saajin I/A Gammachuu waa'ee hojii poolisii kan ibsu hin qabu. "Akka barreessaa Oromoo kamiittuu quuqama hawwaasni qabu, waa'ee duudhaa, safuufi eenyummaa Oromoo calaqqisisun barreesse. Dhaaba, kamiifiyyuu, nama dhuunfaa kamiifuu hin barreessine."
Kitaaba isaa kana yeroo maxxansiifachuuf hojjetaa ture ammoo Waldaa Barreessitoota Oromoo (WBO) waliin hojjechaa turuu yaadachuun isaan waliin turuun isaa ammoo akka maxxansa kitaaba isaarratti isa gargaaraniif ture.
Ta'us garuu tokko kan sababa hojiirraa dhorkamuuf sababa ta'e kana ta'uu akka hin oolles ni kaasa.
Jechi gabaajee Waldaa Barreessitoota Oromoo (WBO) jedhuufi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) jedhu wal dahuun isaallee dubbii isarratti kaasuu isaa ibsa.
Ifatti caasaa kallattiidhaan dhima akka hojiirraa dhorkamuuf murteesse koree naamuusaadha jedhamullee, koree sana eenyu akka hooganu hin beeku jedha.
"Koree sanas ta'e bulchiinsa humna namaatti qaamaan dhiyaadhee haqan qabu ibsachuufillee tokkorraa gara biraatti na daddabarsuun dhuma irratti bilbilaan qofa na waamanii kottuu xalayaa fudhadhu naan jedhan," jedhe.
Kitaaba yeroo jalqabaatiif kuma tokko qofaa maxxansiisuun eebbisiise amma dhumeeruuf ammatti irra deebiin maxxansiisuuf hojjechaa jiraachuus BBC Afaan Oromootti himeera Saajin I/A Gammachuu.
Xalayaa akka hojiirraa dhorkamu barreeffameen ala himannaa miseensi poolisii kun dhiyeeffatu qulqulleeffachuu Komishinii Poolisii Oromiyaatti yaaliin godhame hin milkoofne.
Isa malee miseensonni poolisii 60 ta'an rakkoo naamusaa jedhamuun himatamuu dhaga'uu hima Saajin I/A Gammachuun. Garuu rakkoo naamusaa akkamii akka ta'e hin beeku jedheera.
Dhumarrattis kuusaa walaloo isaa keessaa tokko kunoo jechuun warra dubbisan hafeereera.
Viillaa keessa hin jiraattuu soba walirra tuultee,
Agabuu bakkee joortaa haqa barbaacha duultee,
Waardiyyaa dhugaa taatee erga dhaabbatttee haqaaf,
Waan hin taane funaantee hin jilbeeffattu raqaaf.
Pirof. Mararaa Guddinaa: 'Qabsoo dhiigni Qeerroo itti dhangala'eef wabii barbaadna'
Siyaasa Oromoo: KFO'tti makamuu Jawaar, yaada 'MADRAK' fi tarsiimoo walitti baquu